Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguEmily
UEmily ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Indlu yabucala malunga. 2.5 iiyure. ukusuka kwiMetro Manila, ejikelezwe ngamahlathi kwaye isebenza ngokupheleleyo kumandla elanga.
Ixabiso lendlu yethu libandakanya:
-endulini zokuhlala kwikhabhini yeendwendwe ezili-10
-isidlo sakusasa kwiindwendwe ezili-10
-ukusetyenziswa kwekhitshi, indawo yokutyela, indawo yokuphumla & neendawo zokuhlambela
-ukusetyenziswa kweekayak, ii-SUPs, iintonga zokuloba kunye neevesti zobomi
-imirhumo yobusuku be-Php2,250 / undwendwe (ubuninzi beendwendwe ze-18 zizonke)
-imirhumo yesikhephe yiPhp600 yokudluliselwa kwendlela eyi-1 ehlawulwe kwi-boatman
-Imirhumo yokupaka i-Php200 ngesithuthi ngasinye ngobusuku obuhlawulwe kumlindi wokupaka
ILake House likhaya lethu leholide labucala elinokwamkela amaqela amancinane osapho kunye nabahlobo abangathanda ukuchitha impelaveki ezolileyo nepholileyo kude nesixeko. Sihlala kwiimitha ezingama-300 ngaphezu komphakamo wolwandle kwaye siphefumla owona moya uhlaziyekileyo wentaba ovela kumahlathi ajikelezileyo kunye nempepho yoLwandlekazi lwePasifiki kuphela iikhilomitha ezingama-22. kude. Sijikelezwe buhlaza obuluhlaza kunye nemithi emide yeCaliraya Watershed eyenza amava endalo yokwenyani.
Ikhaya lethu belisebenza ngokupheleleyo kumandla elanga kule minyaka ili-10 idlulileyo kwaye lizise imingeni emininzi yokuphila ngokuzinzileyo. Sicele zonke iindwendwe ukuba ziwathathele ingqalelo amandla azo kunye nokusebenzisa amanzi ngexesha lokuhlala kwazo. Asizivumeli izipheki zerayisi, iijagi ezishushu, izixhobo zokomisa iinwele, ii-ironing irons, iayini yempahla, izixhobo zokudlala kunye naso nasiphi na esinye isixhobo esiya kongeza kumthamo wethu wangoku wamandla.
Iikhabhini zethu zimi ecaleni kwenduli kwaye ziya kufuna ukunyuka phakathi kwama-50 ukuya kuma-72 amanyathelo egadi ngokuxhomekeke kwindawo. Onke amagumbi ethu okulala apholile kwaye akanamoya. Amaqondo obushushu emini nasebusuku akholisa ukuba ngama-4-5 degrees epholileyo kuneManila.
Ikhitshi yethu ixhotyiswe ngezixhobo zokupheka ezisisiseko kunye nezixhobo zeendlela zokupheka eziqhelekileyo kwaye ziquka indawo yangaphandle kunye ne-grill enkulu yegesi kunye ne-oven yezitena. Sineendawo zokutyela zangaphakathi nangaphandle kunye neepleyiti ezaneleyo, izinto zokucheba kunye neeglasi zamaqela abantu abafikelela kwi-12.
Indawo yethu yokuphumla esecaleni kwechibi inommandla obanzi ojonge iLake Caliraya kunye neNtaba iBanahaw entle ngasemva. Igumbi elisecaleni linetafile yenkomfa, ibhodi emhlophe kunye ne-smart TV enokusetyenziselwa iintlanganiso. Ngaphandle koko, unokubukela iifilimu kwiDVD okanye udlale ikhadi kunye nemidlalo yebhodi. Ngeentsuku ezinelanga kakhulu, eli kuphela kwegumbi elinokuba ne-air-conditioning ukuze ukwazi ukuphefumla kubushushu basehlotyeni ngesiqhelo ngoMatshi, ngoAprili nangoMeyi.
Ngasengca kukho indawo yokuzonwabisa apho sinomgodi womlilo, iikayaks, iibhodi zokubhexa, izixhobo zokuloba, iivesti zobomi kunye nezinye izixhobo zemidlalo zangaphandle.
4.85 out of 5 stars from 265 reviews
4.85 · Izimvo eziyi-265
IChibi iCaliraya limi phakathi kwendawo enkulu yamanzi endalo. Indalo engqongileyo ichumile kwaye ichumile, kwaye imozulu imnandi ngamaqondo obushushu apholileyo ebusuku.
Imizuzu eyi-10-15 emfutshane. Ukukhwela isikhephe kude yikhosi yegalufa enemingxuma eli-18, ipaki enkulu yamanzi kunye nesikolo sokusefa umoya kunye nekiteboarding. A 10 min. hamba ukusuka kwindawo yokupaka okanye enye i-5 mins. ngemoto yilali yokuloba apho abantwana banokufunda ukuloba (ukubamba kunye nokukhulula) ngelixa abalobi abanamava ngakumbi banokonwabela ukuloba iintlanzi.
Sinabagcini bezindlu abalungileyo bokunceda ukugcina ikhitshi, indawo yokutyela neyokuphumla icocekile kodwa baya kuhlala bengekho endleleni yakho ngaphandle kokuba kuyimfuneko. Baza kufuna ukuphumla kwabo ukususela ngo-7pm ukuya ku-6 am ngoko ke nceda uyeke ukubaphazamisa ngala maxesha ngaphandle kokuba kuyimfuneko. Ukuba awuqinisekanga ngento onokubacela ukuba bayenze, nceda uqhagamshelane nomninimzi wakho ngokuthe ngqo.
Umamkeli wakho, uSimonette, uya kufumaneka esizeni ngamaxesha athile ukuqinisekisa ukuba izinto eziluncedo zigqityiwe kwaye nezibonelelo zisebenza ngokufanelekileyo. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo ngexesha lokuhlala kwakho okanye ufuna uncedo, ungalibazisi ukufowunela okanye ukuthumela imiyalezo ngokukhawuleza.
Sinenja ehlala apho egama linguBeedo okhululekileyo ukuba angazulazula kwipropathi kwaye anxibelelane neendwendwe. Nceda uqwalasele oku xa ucela ukuzisa izilwanyana zakho zasekhaya okanye ukuba nabani na kwiqela lakho akakhululekanga xa ekunye nezinja.
Sinabagcini bezindlu abalungileyo bokunceda ukugcina ikhitshi, indawo yokutyela neyokuphumla icocekile kodwa baya kuhlala bengekho endleleni yakho ngaphandle kokuba kuyimfuneko. Ba…